Gianluigi Buffon oo Tilmaamay Seddexda Xiddig ee ugu Fiicnaa ee Noloshiisa Ciyaareed uu Wajaho, Waad ku raaci doontaa!!
Wednesday, January 23rd, 2019 - 20:24:21
Wednesday May 09, 2018 - 14:42:31 in Wararka by
Goolhayaha waaya araga ah ee kooxda Juventus iyo Xulka Qaranka Dalka Talyaaniga Gianluigi Buffon ayaa Farta ku fiiqay Seddexda Ciyaaryahan ee ugu Adkaa ee ebed uu Kubadda cagta ku wajaho.
Isagoo wareegsi bixinayay ka hore kulanka Final-ka Coppa Italia oo ay kooxda AC Milan kula ciyaari doonaan garoonka Caasimada ku yaala ee Stadio Olimpico, Buffon ayaa Messi iyo Labada Ronaldo ku sheegay kuwii halista badnaa ee ebed uu arko.
Jawaabtiisu waxa ay aheyd mid cajiib ah markii uu soo bandhigay Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi, iyo sidoo kale halyeeyga reer Brazil Ronaldo, oo la kulmay intii uu joogay labadiisii waqti ee Italy, iyo sidoo kale Champions League.
"Waxaan la kulmay ciyaaryahano waa weyn, mana xasuusan karo dhammaantood," Buffon ayaa qirtay markii la weydiiyay ciyaartoydii ugu fiicneyd ee uu ka hor tago. "Laakiin Messi, Cristiano Ronaldo iyo Ronaldo waa seddexda ugu fiicnaa ee igu dhibaateyay intii aan ku jiray xirfadeyda ciyaareed."